Apple ichagadzirisa kumashure kwechizvarwa chekutanga Apple Watch | Ndinobva mac
Zvinoenderana neruzivo rwakawanikwa nezuro na MacRumors, avo vashandisi vanotenga chizvarwa chekutanga Apple Watch uye kumashure kwewatch kwakadzikira, kambani yekuNorth America ichatora basa rekugadzirisa dambudziko iri.
Iyo yekugadzirisa, iyo ichaitwa mahara, inofanirwa kuitwa zvizere muApple Chitoro kana Authorized technical Service, uye iyo yekuvhara inovhara kusvika pamakore matatu mushure mezuva rekutenga nekumisikidza kwechigadzirwa.
Zvekare zvakare, Apple's technical service inoshanda, chinova hachisi chinhu chidiki nhasi. Apple yakawedzera mutemo wekugadzirisa kune ese ekutanga echizvarwa Watch iyo inogona kuve nehurema hwekugadzira. Sezvineiwo, mune mamwe mamiriro ezvinhu, mamwe mawatch akatambura kupatsanurwa kwekuseri kwekupedzisira kubva kune imwe muviri wemuchina.
Vatengi vakakanganiswa, vanofungidzirwa neCompertino-based kambani se "vashoma vashoma vevashandisi," Vanogona kufonera chero chitoro cheApple kana kukumbira musangano online uye kuronga kubvunzana ne shasha, kana enda wakananga kune Yakatenderwa technical Service yechiratidzo.
Vazhinji vashandisi vakagovana mifananidzo pamasocial network uye munharaunda dzeApple, kupi iwe waigona kuona yake Apple Watch nevhavha yekumashure yakabviswa kubva mumuviri wewachi. Pane dzakawanda nguva, dambudziko rakakonzerwa pakubvisa wachi kubva kune yayo yekuchaja base.
Kukundikana uku, izvo zvinotoita kunge zvakagadziriswa mune inotevera mamodheru eApple Watch, zvinofungidzirwa nekuda kwekukanganisa mune yekunamatira inoshandiswa mukugadzirwa kwemidziyo yekutanga yekambani yemapuro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple ichagadzirisa kumashure kweanokanganisa chizvarwa chekutanga Apple Watch